जापानीज संस्कार र पद्धति: हामीले सिक्न जरुरी - eNayapusta
जापानीज संस्कार र पद्धति: हामीले सिक्न जरुरी
नवीन लामा २५ असार २०७७, बिहीबार १३:२९ 341 पटक हेरिएको
जापान क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा करिब २।५ गुणामात्र ठूलो मुलुक भए तापनि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)को हिसाबमा विश्वकै तेस्रो ठूलो मुलुक हो। जापानको कुल भूभागको करिब ६६ प्रतिशत पहाड रहेको छ। जापान राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुक हो। जापानको ऐतिहासिक कालखण्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खण्डको रुपमा भने इडो काल (१६०३–१८६८), मेजी काल ९१८६८(१९१२०, सोभाकाल (१९१२-१९४५० र विश्वयुद्धपछिको समय ९१९४५ देखि हालसम्म)लाई लिन सकिन्छ।
इदो कालमा विशेषतः वर्गीय सामाजिक व्यवस्था कायम थियो। जसमा शासन सञ्चालन गर्ने सैनिक, कृषक, शिल्पकार तथा व्यापारी गरी चार प्रकारका वर्गमा समाजलाई विभाजन गरिएको थियो। इदो कालमा भएको समाजिक असमानता तथा विभेदलाई अन्त्य गरी वर्गविहनि समाजको निर्माण गर्दै मेजी वंशजका राजाले जापानलाई आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, शैक्षिक, साँस्कृतिकलगायत विकास गरेका थिए।
मेजी काललाई जापानको विकासको स्वर्ण युग मानिन्छ। जापानको इतिहासमा प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रा विश्वयुद्धको अलावा चीन तथा रुससँग पनि विभिन्न चरणमा युद्धहरु भएका थिए। तथापि, दोस्रा विश्वयुद्धमा अमेरिकाद्वारा खसालिएको एटम बमबाट हिरोसिमा र नागासाकीमा करिब २ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो।
दोश्रो विश्वयुद्धपश्चात जापानले सैन्य सुदृढीकरण नगरी आर्थिक, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा निकै फड्को मारेको सबैलाई अवगतै छ। जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिला आर्थिक विकास खासै भएको थिएन। यद्यपि, ठूला कलकारखाना भने थिए। जापानको विकासमा प्रमुख भूमिका यहाँको पद्धति तथा संस्कार नै हो। जापानको विकासको मूलसत्र नै गुणस्तरीय काम तथा कामलाई गरिने सम्मानै हो। जापानबाट हामीले सिक्न सकिने केही कुराहरु छन्, जुन यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु।
१. कडा कानुनः जापानमा नागरिकलाई कानुनबमोजिम पूर्ण स्वतन्त्रता छ। तथापि, जापानीज कानुनलाई कडा नै मानिन्छ। जस्तै, मादकपद्धार्थ सेवन गर्न छुट छ। तर, मापसे गरेर सवारी चलाउनेलाई जीवनभर चालक अनुमति प्रमाणपत्र खारेज गरी कम्पनीबाट सधैंको लागि निष्कासन गरिनेछ। नेपालबाट मासु लिएर जापानमा प्रवेश हुँदा अध्यागमन अधिकृतले एयरपोर्टबाट सपरिवार जापानबाट देश निकाला गरी नेपालमा नै पठाएको थियो।
२. कामप्रतिको सम्मान गर्ने संस्कारः जापानमा कामलाई सानो ठूलो भनिँदैन। काम गर्ने ठाउँमा आफ्ना श्रमिकसँगै म्यानेजरहरु पनि काम गर्छन्। यहाँ काम यसो गर उसो गर भनी निर्देशन दिनुभन्दा पनि म्यानेजर आफै सँगै काम गर्छन्। जापानमा कामलाई सानो वा ठूलोभन्दा पनि शारीरिक परिश्रम धेरै वा कम लाग्ने गरी विभाजन गरिन्छ।
सबै प्रकारको पार्टटाइम काममा औसतमा घन्टाको जापानीज येन १००० देखि १२०० सम्मको ज्याला दिइन्छ। राति गर्नुपर्ने तथा धेरै शारीरिक बल पर्ने काममा अलि बढी नै ज्याला दिइन्छ। जापानमा कपाल काट्ने काम पनि जापानीजले नै गर्दछन्।
३. सफा तथा स्वच्छ वातावरणः जापानलाई विश्वकै सफा मुलुकको रुपमा लिइन्छ। उच्च औद्योगिक कलकारखाना भएपनि वातावरण प्रदुषण देखिँदैन। यहाँ पहिलो त कसैले पनि बाहिर फोहोर गरेको देखिँदैन। फोहोर गरिएमा कडा जरीवाना तोकिएको छ। दैनिक फोहोरलाई जलाउने मिल्ने र नमिल्ने गरी गरी छुट्याएको हुन्छ। दिन बिराएर फोहोर लिन आउँछ। त्यसबाहेक ठूल्ठूला पुराना सामान फाल्न परे नगरपालिकामा गएर निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ। निश्चित रकम तिरेर मात्र फोहोर फाल्न पाइन्छ।
विद्यालयमा सफा गर्ने मानिस हुँदैन। विद्यार्थीहरु आफैले कक्षा कोठा सफा गर्नु पर्छ। हरेक वडामा एउटा पार्क र खेल मैदान हुन्छ। पार्कमा बच्चाहरुलाई खेल्ने सामग्री राखिएको हुन्छ। भूकम्प गएमा सुरक्षित बस्नसमेत सकिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
४. सार्वजनिक सेवा प्रवाहः जापानमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अधिकतम भएपनि सूचना प्रविधिसँगै कागजी प्रक्रियाहरु पनि अवलम्बन गरिँदैछ। जापानमा वडा कार्यालयलाई सिटी अफिस भनिन्छ। सिटी अफिसमा एक जना सेवाग्राहीलाई एकै जना कर्मचारीले काम नसकेसम्म सबै प्रकिया पूरा गरी दिन्छन्।
भ्रमण भिसाबाहेकका सबै जापानमा बस्ने व्यक्तिले सिटी अफिसमा अनिवार्य रुपमा रेकर्ड राख्नु पर्दछ। हरेक व्यक्तिको ‘रेजिडेन्ट कार्ड’ हुन्छ। विदेशी नागरिकले ‘रेजिडेन्ट कार्ड’ २४ सै घन्टा बोक्नु पर्छ। प्रहरीबाट कुनैबेला शंका भई जाँच भएमा ‘रेजिडेन्ट कार्ड’ देखाउन नसकिएमा भारी जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
ठेगाना परिवर्तन भएको दुई हप्ताभित्र विवरण सिटी अफिसमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ। सिटी अफिसबाट प्राप्त गर्ने हरेक सेवासुविधाको लागि ‘रिसेडेन्ट कार्ड’ चाहिन्छ।
यहाँ कर्मचारीको मुल्यांकन ३६० डिग्रीमा गरिन्छ। यसको अर्थ आफ्नो सिनियर र जुनियर तथा सँगैको लेभलको साथीहरुले आफ्नो मूल्यांकन गरिदिन्छन्। आफ्नो जुनियर कर्मचारीहरुबाट पनि सिनियरले सिक्ने गर्दछ।
जापानको सडकमा उच्च सवारी चाप देखिन्छ। तथापि, सडकमा अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरी त के कुनै पनि प्रहरी देखिँदैन। सबैले ट्राफिक सिग्नलको प्रयोग गर्छन्। सडकमा जथाभावी बाटो काट्दैनन्।
जापानमा बसोबास गर्ने जापानीज वा गैरजापानीज सबैका बालबालिकाको लागि आमाबुबाको आम्दानी, परिवारमा बालबालिकाको संख्या तथा बालबालिकाको उमेरअनुसार १० देखि २० हजारसम्म भत्ता पाउँदछ।
५. सडक तथा यातायातः जापानमा यातायातको साधनहरुमा मेट्रो ट्रेन, फास्ट ट्रेन, बस, ट्याक्सी तथा साइकलहरुको नै प्रयोग हुन्छ। प्रायः हरेक जापानीजको ननजी कार रहेको देखिन्छ। तथापि, जापानीजहरु स्कुल, अफिस जाँदा मेट्रो ट्रेनको नै अधिक प्रयोग गर्दछन्। सबैभन्दा लोकप्रिय मेट्रो नै देखिन्छ।
जापानमा मोटरसाईकल ज्यादै न्यून रहेको छ। साइकलको लागि छुट्टै ट्र्याक रहेको छ। हरेक साइकलको नम्बर हुन्छ। मापसे गरेर साइकल पनि चलाउन पाइँदैन।
दृष्टिविहीनका लागि हिँड्डुल गर्न सडक पेटीमा विशेषखालको ट्राय बनाइएको छ। यातायातका साधनहरु प्रायः निजी कम्पनीहरुकै देखिन्छ। यद्यपि, यात्रु नभए पनि बस तथा रेल सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
गुगल म्यापको सहायताबाट कुनैपनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कति बजे ट्रेन आउने सबै विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। सडकहरु ठूला र फराकिला छन्।
टोकियो तथा ठूला सडकहरुमा ट्राफिक जाम केही हदसम्म त देखियो। यहाँ चुरे पहाडजस्ता साना–साना पहाडहरु उत्तरदेखि दक्षिणसम्म नै फैलिएर छन्।
पहाडमा सबै सुरुङ मार्गहरु बनाइएका छन्। मानिसको बसोबास पहाडको फेदीमा छन्। पहाडमा खेतिपाती तथा बसोबास गर्न मनाही छ। यद्यपि, हिउँ परेको बेलामा पहाडमा स्की खेलहरु हुने गर्दछ।
६. शान्ति सुरक्षाः जापान संसारकै सुरक्षित देशको रुपमा रहेको छ। यहाँ आपराधिक क्रियाकलाप तथा सवारी दुर्घटना दर ज्यादै न्युन छ। दिन होस् या रात कुनैपनि समय निर्धक्क हिँड्न सकिन्छ। चोरी अपराध बलात्कार भन्ने शब्द जापानको शब्दकोषमा नै छैन कि जस्तो लाग्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा बाटो, ट्रेन वा कहि कतै सामान छुटेको छ भने कसैले छुँदैनन । प्रहरीले पछि सम्पर्क गरी उपलब्ध गराउँछ।
७. शिक्षाः जापानमा नर्सरीलाई कोदोमोइन भनिन्छ। हरेक वडामा जनघनत्व हेरी सरकारी कोदोमोइनहरु खोलिएका छन्। कोदोमोइनमा २ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको भर्ना हुन्छ।
गज्जबको कुरा के छ भने आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउनु छ भने विद्यालय जानु पर्दैन। सिटी अफिस (वडा कार्यालय)मा गएर निवेदन दिनुपर्छ। सिटी अफिसले नै सम्पूर्ण क्राइटेरिया हेरेर कुन विद्यालयमा भर्ना हुने हो सबै व्यवस्था मिलाउँछ।
नर्सरीमा बालबालिकाले साथीहरुसँग खेल्ने, जापानिज भाषा लेख्न, पौडी खेल्न, नाच्ने, गीत गाउने, चित्रकला तथा विभिन्न खेलहरु मात्र सिकाइन्छ।
उमेर ६ वर्ष भइसकेपछि इलिमेन्टरी स्कुलमा बच्चाहरु जाने गर्दछ। इलिमेन्टरी स्कुलमा बच्चाहरुलाई जापानीज भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, खाना पकाउने, संगीत, खेल, सुचना प्रविधि, अर्थशास्त्र विषयको अध्यापन गराइन्छ।
विद्यार्थीहरुलाई कथा, खेल, नाटकआदिको माध्यमबाट नैतिकताको ज्ञान दिइन्छ। विद्यालयमा आफ्नो कक्षा कोठा विद्यार्थी आफैले सफा गर्नु पर्दछ।
कोदोमोइन (नर्सरी) तथा इलिमेन्टरी स्कुलमा विद्यार्थीलाई खानाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। छात्राले कपाल निधारभन्दा तलसम्म छाड्न पाइँदैन र मोबाइल पूर्ण प्रतिबन्धित रहेको छ।
हरेक टोलका ठूला विद्यार्थीलाई मोनिटर बनाइन्छ। उसले सबै साना विद्यार्थीलाई घरसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी विद्यार्थीलाई सानै उमेरदेखि जिम्मेवारी बनाइन्छ।
८. जापानीजको स्वभावः जापानीजहरु कम बोल्ने स्वभावका हुन्छन्। कोही कसैसँग काम परेमात्र बोल्ने हो। मेट्रो ट्रेनमा खचाखच भीड हुँदा पनि आवाज चुइक्क निस्किँदैन। सबै मोबाइलमा व्यस्त देखिन्छन्। तर, बस तथा मेट्रोमा मोबाइलमा कुराकानी गर्न मनाही छ। कसैले कसैलाई झुक्केर पनि छुँदैनन्। कसैले झुक्किएर छुएमा ३ देखि ४ पटकसम्म शीर झुकाएर माफ माग्छन्।
प्रायः जापानीज फुर्सदिला देखिँदैनन्। फुर्सद भएपनि कोहीसँग बोल्दैनन्। जापानीज कसैलाई नराम्रा भन्दैनन्। केही सुझाव दिनु परेमा सकारात्मक कुराबाट सुरु गर्छन्। उनीहरु हरेक क्षण आफ्नो कारणले अरुलाई दुःख नहोस् भन्ने चाहन्छन्। कुनै ठाउँमा लाइन बस्नु परेमा अरुलाई अगाडि जानुस् भन्छन्।
९. स्वास्थ्य सेवाः जापानमा बसोबास गर्ने सबै स्वदेशी तथा विदेशीले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नु पर्दछ। स्वास्थ्य बिमाबाट ७० प्रतिशत खर्च व्यहोरिन्छन्। व्यक्तिले ३० प्रतिशतमात्रै व्यहोर्नु पर्दछ। जापानमा कुनैपनि डाक्टरको सल्लाहबिना औषधि पसलबाट औषधि किन्न पाइँदैन।
१०. कृषिः यहाँ आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। विदेशी कृषि उपजमा करिब ८०० प्रतिशत भन्सार कर लाग्दछ। यसबाट स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्दछ। त्यस्तै, जापानभरिको कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नको लागि जापानीज एग्रिकल्चर भन्ने सहकारी संस्था रहेको छ।
उत्पादन तथा बजारीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण सप्लाई चेनको व्यवस्थापन यही सहकारीले गर्नुका अलावा किसानका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, बिजन, मल, खाद्य, कृषि बिमा तथा सबै सुविधा दिइन्छ। किसानलाई चाहिने हरेक कृषि उपकरणहरु यसै सहकारीमार्फत्् भाडामा उपलब्ध गराइन्छ।
यस सहकारी संस्थाले कृषकहरुलाई प्राविधिक सहयोग तथा ऋणसमेत व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। किसानको काम उत्पादन गर्नु मात्र हो। किसानको सहकारी भएका कारण लागतबमोजिमको मुल्यांकन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
११. समय पालनाः जापानको सबैभन्दा लोभलाग्दो पक्ष भनेको समयको पालना नै हो। हरेक मान्छे कुनैपनि कार्यक्रममा ३० सेकेण्ड पनि ढिलो हुँदैनन्। जापानको कुनैपनि बस तथा ट्रेन १० सेकेन्ड पनि ढिलो हुँदैन। क्याम्पसमा १ सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी कक्षा सुरु हुन्छ।
टोकियोमा बुलेट ट्रेनको सफाई ७ मिनेटमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ७ मिनेटमा सफा नगरे कर्मचारीले काम छाड्नु पर्ने वा सेवासुविधा कम पाउने व्यवस्था छ। समय पालना नगर्ने मानिसलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। जापानमा तोकिएको समयभन्दा ५ मिनेट अगावै पुग्नु पर्ने मान्यता रहेको छ।
१२. भेन्डिङ मेसिनः जापानका हरेक चोक तथा सडकतिर जताततै चिसो पद्धार्थ, कोकाकोला, जुस, पानी, कफी, चिया आदिको स्वचालित भेन्डिङ मेशिन रहेको छ। तोकिएबमोजिमको पैसा मेशिनमा राखि आफैले निकाली जतिखेर पनि पिउन तथा खान सकिन्छ।
त्यस्तै, जापानमा धेरै बैंकहरुको फिजिकल शाखाबिना नै काम भएको देखिन्छ। बैंकहरुले पायक पर्ने स्थानमा एटिएम मेशिन राखेको हुन्छ। सो मेशिनबाट पैसा जम्मा गर्न र झिक्न पनि सकिन्छ। बैंकको वेबसाइटबाट फर्म भरी बैंक खाता खोल्न सकिन्छ। बैंकले हुलाकमार्फट एटिएम कार्ड पठाउँदछ।
१३. निर्वाचनः जापानमा निर्वाचनको बेला पनि जापानीजहरुलाई फुर्सद हुँदैन। जापानमा चुनावको प्रचारप्रसार खासै हुँदैन। कुनै चोकमा उम्मेदवारले आफ्ना घोषणापत्रबारेमा माइकिङ गर्छन्। उmसँग कार्यकर्ता पनि हुँदैन। कोही पनि कार्यकर्ताहरु उम्मेदवारको अघि पछि हिँड्दैनन्।
१४. हुलाक सेवाः जापानको हुलाकको त जति प्रशंसा गरेपनि कम नै हुन्छ। यहाँ हुलाकले पत्राचार गर्नुको साथै कुरियर, ट्रान्सपोर्टका काम, बिजुली, टेलिफोन, इन्सुरेन्सलगायत बिलहरु हुलाकमार्फत नै आउँछन्।
हुलाकले जीबन बिमा, रेमिट्यन्स सेवा तथा हुलाक बैंक सञ्चालन गरेको छ। जुन प्राइभेट बैंकभन्दा पनि राम्रो र भरपर्दो रहेको छ। हरेक घरको हरेक कोठाको एउटा एउटा हुलाक बक्स घरको तल राखिएको हुन्छ। नजिी तथा सरकारी सूचनाहरु विद्यालयको बिलहरु पनि हुलाकबाट नै आउँछ।
तर, गोप्य पत्रहरु हुलाकीले भेटेरै दिने गर्दछ। हुलाकीले नभेटेमा एउटा पत्र छाडेको हुन्छ र सो पत्र लिएर हुलाक कार्यालयमा जानु पर्दछ।
१५. निजी सेवाहरुः नजिी कम्पनीहरुबाट सेवा लिनु परेमा वेबसाइटबाट फर्महरु भरी अर्डर गर्न सकिन्छ। जस्तै, कुनै सिमकार्ड खरिद गर्नु परेमा वेबसाइटबाट फर्म भरी हुलाकबाट सिमकार्ड लिन सकिन्छ। जापानमा अनलाईन सपिङ्गको प्रावधान पनि राम्रो छ।
१६. खानपानः जापानमा मानिस यति धेरै व्यस्त हुन्छन् कि घरमा कसैले पनि खाना बनाउँदैनन्। जापानमा रेष्टुरेन्टका अलवा साना–साना मिनिमार्ट फ्यामिलीमार्ट, सुपरमार्केटमा पनि प्याकेजिङ खाना पाइन्छ, जसलाई बेन्तो भनिन्छ।
लागतको हिसाबले जापानमा घरमा खाना बनाउनुभन्दा खाना किनेर खानु नै सस्तो पर्छ। जापानमा अल्कोहल सेवनलाई जापानीज संस्कृतिको रुपमा लिइन्छ। जापानीजले अधिकतम सिफुडहरु खाने गर्दछन्। प्रायः सबै प्रकारको माछा मासुको परिकार खाने गर्दछन्। हरेक नयाँ वर्षको १ हप्ता जापानभरि बिदा हुन्छ। सो समयमा परिवारजनसँग रमाइलो भेटघाट गर्ने गर्दछन।
१७. समस्या तथा चुनौनीः जापानीजको औसत आयु ८५ वर्ष रहेको छ। जुन हङकङपछि जापान नै विश्वमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
जापानको करिब १३ करोड जनसंख्यामध्येमा करिब ३० प्रतिशत मानिस ७० वर्ष उमेर नाघेका छने। जेष्ठ नागरिकको संख्या उच्च हुनु तथा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने नै यहाँको प्रमुख समस्या रहेको छ। आर्थिक विकासका लागि चाहिने मानव संसाधनको कमी भएका कारण यहाँ एसियाका विभिन्न मुलुकबाट रोजगारीको लागि ल्याउन थालिएको छ।
(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत लामा हाल जापानमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत् छन्।)
टिस्टा र काँकडासम्म दाबी
राष्ट्रियता दह्रो बनाउन भावनात्मक
सम्पादकीय: बुद्धिचालमा बुद्धिहीन नेतृत्व
संस्कृत अन्य भाषाभाषीमाथिको विभेद
बाबुरामको टिप्पणीः ओलीको प्रवृत्ति
टिप्पणी: पुलिसको ‘फुलिस’ काम!
यसकारण कोरोनाभाइरस यति खतरनाक
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा